निफ्रासहित यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ? - नेपालबहस
निफ्रासहित यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ?
| १३:४६:३३ मा प्रकाशित
२ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि करेक्सनको यात्रामा अधि बढिरहको नेप्सेमा सोमबार पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग देखिएको छ ।
आज सोमबार नेप्सेमा कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्येमा चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनी, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ, अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनी, नेपाल इफ्रास्ट्रक्चर बैंक र नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरको उच्च माग देखिएको हो ।
नेप्सेमा चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएपश्चात आज सोमबारसम्म आईपुग्दा बढोत्तरी कै यात्रामा बढिरहेको छ । कम्पनीले माघ २३ गते, शुक्रबार एक करोड ५३ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो । सूचीकृत पश्चात कम्पनीको शेयर निरन्तर बढिरहेको छ ।
नेप्सेले चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि न्युनतम ९६ रूपैयाँ ६९ पैसादेखि अधिकतम २९० रूपैयाँ ७ पैसासम्मको कारोबार रेञ्ज प्रदान गरेको थियो ।
कारोबार सुरु भएदेखि चैत २ गते सम्म आईपुग्दा कम्पनीको प्रतिशेयरमूल्य १००० नजिक पुगेको छ । प्रतिशेयरमूल्य ९ सय ७२ पुग्दा शेयर बेच्ने शून्य छन् । भने शेयर खरिद गर्नेको उच्च चाप देखिन्छ । आज चन्द्रागिरीको शेयर माग गर्नेको संख्या ६ लाख १३ हजार पुगेको छन् भने बिक्रि गर्ने कोही छैनन् ।
त्यस्तै, उच्च शेयर माग हुनेको दोस्रो स्थानमा सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रहेको छ । सोमबार कम्पनीको शेयर ३ लाख ३२ हजार कित्ता शेयरको माग भएको छ । भने शेयर बिक्री गर्ने ६ लाख ३७ हजार इकाई बिक्रीको आदेश छ ।
त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनी शेयरमा पनि उच्च माग देख्न सकिन्छ । कम्पनीलाई तत्कालै तोपत्र बोर्डले हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको थियो ।
जसकारण केहि समयदेखि कम्पनीको शेयर किन्नेको भिड् लागेको हो । आज कम्पनीको २ लाख ४३ हजार कित्ता शेयरको माग परेको छ । बिक्री गर्ने भने ७० हजार मात्र छन् ।
त्यस्तै निफ्रा बैंक शेयरमा पनि उच्च माग छ । आज बैंकको २ लाख २९ हजार कित्ताको माग छ भने बिक्री गर्ने भने १ लाख देखिएका छन् ।
त्यस्तै पाँचौ शेयरको उच्च डिमान्ड हुनेमा नेशनल हाइड्रो पावर रहेको छ । आज १ः३० बजेसम्म कम्पनीको २ लाख २५ हजार शेयरको माग भएको छ भने बिक्री गर्ने भने ६५ हजार मात्र रहेका छन् ।
९ कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीका दरले बढ्यो १० घण्टा पहिले
पाँच कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता मूल्य कति ? ११ घण्टा पहिले
नेप्सेमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन १३ घण्टा पहिले
जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ जनशक्ति छैनन् ८ घण्टा पहिले
हेटौँडा अस्पतालमा क्यान्सर पत्ता लगाउनका लागि परीक्षण सेवा १० घण्टा पहिले
कोरोना जोखिमका कारण विक्रमबाबा मेला स्थगन ८ घण्टा पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ चैत्र २९ गते आइतबारदेखी बैशाख ०४ गते शनिबारसम्मको ] ५ दिन पहिले
कोरोनाका कारण पत्रकार कमल मिश्रको मृत्यु ९ घण्टा पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट बाँकेमा एक पुरुषको मृत्यु ११ घण्टा पहिले
संक्रमणको दोस्रो लहर : २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने ६ दिन पहिले
चलचित्र बनाउदै शम्भुजित, नायकमा पुष्पलाई अफर २ दिन पहिले
कालिकोटमा आगलागी हुँदा छ घर जलेर नष्ट ४ दिन पहिले
नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका गगन कोरियामै अस्ताए २ हप्ता पहिले
रामग्रामका शहरी पूर्वाधार निर्माणमा विश्व बैंकको सहयोग ३ हप्ता पहिले
इरानमा परमाणु केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण ३ दिन पहिले
देशभर डढेलो फैलने क्रम तिब्र १ हप्ता पहिले
जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक तटबन्ध निर्माण ४ हप्ता पहिले
प्रदेश २ मा एकैसाथ १० जनामा संक्रमण ३ हप्ता पहिले
उपत्यकामा ट्राफिक बत्तीले सवारी व्यवस्थापनमा सहज २ हप्ता पहिले
संसदीय छानबिन समितिले सभामुखलाई बुझायो सोती घटनाको प्रतिवेदन ९ महिना पहिले
आँखा अस्पताल नजिकै युवक मृत फेला २ महिना पहिले
लकडाउनको दुई साता बितिसक्दा समेत अधिकांश तहहरुले गरेनन् राहत वितरण १२ महिना पहिले
आगामी २३ फागुनदेखि ६० वर्ष माथिकालाई कोभिड खोप दिइने २ महिना पहिले